May 2018 – CRM
Posted on May 31, 2018 Author swelsone	Comment(0)
Posted on May 30, 2018 Author swelsone	Comment(0)
The situation is dire, says Ambassador-at-Large for International Religious Freedom Sam Brownback The United States has asked for more action from the international community regarding the Rohingya issue and other areas of concern in Myanmar in the coming days, terming the situation “dire.” “Former secretary Tillerson had announced that evidence of ethnic cleansing had been […]
Posted on May 26, 2018 Author swelsone	Comment(0)
Washington, D.C. – House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce (R-CA) issued the following statement on House passage of H.R. 5515, the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019: “In an increasingly dangerous world, it is critical that our troops have the support they need to keep America safe. This bill includes vital funding for […]
ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြန်လာရေး အားတက်စေဖို့ရာ စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ရင်းစေတနာကို ပြသဖို့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ အကြီးအကဲက မြန်မာအစိုးရကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ (USAID) အကြီးအကဲ Mark Green ဟာ သုံးရက်ကြာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် အဆုံးသတ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်အနောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ရခိုင် လူမှုအဝန်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် အဲဒီလို တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမလာခင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း သူနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာ ကြောက်လန့်နေကြပြီး ပြန်လာချင်ကြပေမဲ့ ပြန်ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှာ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်ပေးဖို့ တောင်းခံ ကြတယ်လို့ မစ္စတာ Green ကပြောပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာ ပြန်လာနိုင်ရေး […]
Posted on May 17, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)